Nagu saabsan - Hangzhou Shanyou Qalabka Caafimaadka Medical Co., Ltd.
Waxaa la aasaasay 2002, Hangzhou Shanyou Qalabka Caafimaadka Medical Co., Ltd. ayaa soo saaray suuxdinta iyo alaabada la tuuri karo ee neef mareenka ah. Waxaan bilaabaynaa inaan wax soo saarnoMaaskarada Wajiga Caafimaadka iyo PPE laga bilaabo Febraayo 2020 sababo la xiriira faafida cudurka faafa ee corona. Lagu caddeeyayCE, ISO13485 iyo FDA, Shirkadeenu waxay ku raaxeysataa sumcad aad u wanaagsan oo ka dhex jirta macaamiisheenna oo ka kala socda in ka badan 50 waddan sida Jarmalka, Mareykanka iyo Japan, iwm Hangzhou Shanyou brand “ SHAQO “Waxaa si ballaaran loogu amaanay waxyaabo tayo sare leh.
Aqoon isweydaarsi qol nadiif ah
Warshadaha & Awoodda
Hangzhou Shanyou Medical "SHAQO" wuxuu daboolayaa aagga dhismaha 68,000 mitir laba jibbaaran halka aqoon isweydaarsiga qolka nadiifka ah 15,000 mitir laba jibbaaran Waxaan soo iibsanay in ka badan 200 khadadka wax soo saarka maaskaro dhaqameed, iyo sagaal xariiq oo casri ah oo xawaare aad u sarreeya oo wax soo saar otomaatig ah leh. Awoodda "SHAQO" maaskaro wajiga wajiga waa 10 milyan kumbuyuutar / maalin, taasi waa 300 milyan bishii. Waxaan u dhoofineynay Ingiriiska, Faransiiska, Isbaanishka, Jarmalka, inta badan qandaraasyada dowladda oo aad u tiro badan.
Hangzhou Shanyou Medical "SHAQO" qaadataa "Shanyou Ruuxa", taas oo ah, "macaamiisha u janjeedha, farsamada iyo tayada ayaa xudunta u ah" u adeegida bulshada.
Waaxdeena QC waxay leedahay kooxda kudhowaad 45 qof, inta lagu gudajiray kormeerka alaabta ceyriinka ah, Kormeerka Nidaamka, Waxsoosaarka Dhammeystiran. Kooxda xirfadleyda ah waxay damaanad qaadayaan adkeysiga tayada sare leh.
Shaybaarka ayaa daboolaya 500m2, oo lagu qalabeeyay tas-hiilaad tijaabo oo dhameystiran oo loogu talagalay Maaskarada Wajiga Caafimaadka iyo FFP2, maaskaro FFP3.
Hangzhou Shanyou Medical "SHAQADA" waxay buuxineysaa shuruudaha Heerarka Nidaamyada Tayada ee ISO 13485, Xeerka Golaha Yurub ee 93/42 / EEC, XEERKA PPE (EU) 2016/425 waxayna ka diiwaangashan tahay US FDA, Saudi Arabia FDA, iyo Australia TGA.
Waxaan haynaa Shahaadada TUV Rheinland CE ee loogu talagalay maaskaro wajiga qalliinka (nooca IIR) iyo Maaskaro Caafimaad ee wajiga (nooca I, nooca II) sida ku cad EN 14683-2019.
Wajiyadeena FFP2 / FFP3 waxay heleen shahaadooyinka SGS CE iyo shahaadada Universal CE sida ku cad EN149: 2001 + A1: 2009 waxayna heleen SGS Reach Report.
Hangzhou Shanyou Medical “SHAQO” waxay si adag u raacdaa qawaaniinta caalamiga ah si loo soo saaro alaabtayada, hubi in shay kasta uu buuxiyo qawaaniin gaar ah iyo shuruudaha macaamiisha.